စာရေးဆရာ နှင့် သတင်းထောက် မတူတာလေးတွေ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Choice » စာရေးဆရာ နှင့် သတင်းထောက် မတူတာလေးတွေ။
စာရေးဆရာ နှင့် သတင်းထောက် မတူတာလေးတွေ။
Posted by black chaw on Feb 3, 2012 in Editor's Choice, My Dear Diary, Think Different | 20 comments
ကိုဖက်တီး ရေးသည့် သူကြီးသို့ http://myanmargazette.net/92781/mandalay-gazette-2/editors-choice
ကိုဇော်မင်း ရေးသည့် ဂေဇက်ဘာလဲ … ဘယ်တော့လဲ
ဆိုသည့်ပို့စ်လေးကို ဖတ်မိရာမှ ဒီပို့စ်လေးကို ရေးဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဖက်တီးက သူကြီးကို ဒီလိုမေးထားပါတယ်။
သူကြီးထံမှ မန်းဂဇက် အတွက် တရားဝင် အထောက်အထားတစ်ခုခု ထုတ်ပေးရန် တောင်းဆိုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကိုဇော်မင်း က ဒီလို ထပ်ရေးပါသည်။
ကျနော်တို့ရဲ့ မန်းဂေဇက်ကြီးလည်း ပြည်တွင်းမီဒီယာအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ ပြောလို့မရပါဘူး…
အကယ်၍ မန်းဂေဇက်သည် ပြည်တွင်းမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါက ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့အိပ်၍မပျော်နိုင်သောကြောင့်
သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်အတူ ပြည်ပအခြေစိုက် သတင်းမီဒီယာများ ပြည်တွင်းသို့ ၀င်လာပြီး ရပ်တည်ကြတော့မည့် သတင်းတွေ
ဟိုမှ သည်မှ ကြားနေရပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ မန်းဂဇက်ကြီးကလည်း ပြည်တွင်းသို့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ရောက်လာတော့မည်ဟု
မျှော်လင့်ရပါသည်။ အခုတောင် သူကြီးအနေဖြင့် သတင်းထောက်ကဒ်တွေ ထုတ်ပေးဘို့ စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားနေပါလိမ့်မည်။
ထို့အတွက် သတင်းထောက်ဝါသနာပါကြသော ကျွန်တော်တို့ ရွာသူရွာသား တွေအနေနဲ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်လေ့လာထားကြ ရတော့မည့်
အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အခုလောလောဆယ် ကျွန်တော်တို့ ရွာသူရွာသားတွေထဲမှာ သတင်းထောက်စစ်စစ်ကြီးတွေ မရှိသေးဟု ထင်ပါသည်။
စာရေးသူ (ဒီနေရာမှာ စာရေးဆရာလို့ မသုံးတာ ကျွန်တော်တို့က စာရေးဆရာစစ်စစ်တွေ မဟုတ်သေးလို့ပါ) တစ်ယောက်နှင့် သတင်းထောက်တစ်ယောက်
သဘောသဘာဝခြင်း မတူကြကြောင်း ကျွန်တော် ဖတ်ခဲ့ရဘူးပါသည်။ အဲဒါလေးကို ဝေမျှပေးချင်တာပါခင်ဗျာ။ သတင်းထောက်လုပ်ကြမယ့် စာရေးသူတွေအတွက်ပါ။
ဆရာမင်းထက်မောင်၏ ယနေ့ခေတ်ဂျာနယ် (16-5-2000 issue) တွင် အယ်ဒီတာ့စကားမှ စာပိုဒ်လေးတစ်ပိုဒ်ကို ဖေါ်ပြပေးချင်ပါသည်။
တကယ်တော့ စာရေးသူ လူတစ်ယောက်တည်းမှနေ၍ စာရေးဆရာအလုပ်ကိုရော၊ သတင်းထောက်အလုပ်ကိုပါ တစ်ပြိုင်နက် လုပ်ကိုင်နိုင်ကြပါသည်။ လုပ်ကိုင်ခွင့် ရှိသည်လည်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ လုပ်ကိုင်ခြင်းသည်လည်း အကျိုးရှိသော၊ ကောင်းမြတ်သော ကိစ္စတစ်ရပ်ပါပေ။ သို့သော် စာရေးဆရာနှင့် သတင်းထောက်တို့၏ အလုပ်သဘော သဘာဝခြင်း၊ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်ခြင်း မတူ ကွဲပြားခြားနားကြောင်းကိုတော့ သတိပြုဆင်ခြင်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ စာရေးဆရာအနေဖြင့် ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်ကို ရေးသားသောအခါ၌ မိမိ၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းပေါ် အခြေခံ၍ ခံစားရေးဖွဲ့နိုင်သော်လည်း သတင်းထောက်အနေဖြင့်မူ သတင်းတစ်ပုဒ်ကို ရေးသားသောအခါ၌ လက်တွေ့အဖြစ်မှန်အပေါ် အခြေခံ၍ မိမိ ခံစားမှုမပါပဲ အပိုအလိုမရှိ ရေးသားရန် လိုအပ်ပေသည်။ သည်နှစ်မျိုးလုံးကို ရောထွေးပစ်၍ကား မဖြစ်ပါ။ မိမိ၏ နှစ်ဘ၀ကို မိမိဘာသာ စည်းခြား၍ ချုပ်ထိန်းဖြတ်သန်းနိုင်ပါမှ အောင်မြင်ခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်ဟု…။
အဲဒါလေးပါ။ သိထားသင့်တယ် ထင်လို့ ရှယ်လိုက်တာပါ။
နောက်လည်း သိထားသင့်တယ်ထင်တာလေးတွေ ဖတ်မိရင် ရှယ်ပေးပါဦးမယ်။
ရွာသူရွာသားတွေထဲက သိထားသင့်တာလေးတွေလည်း ရှယ်ပေးကြပါဦးဗျာ။
သတင်းသမားလုပ်ဖို့ လဲ မလွယ်ပါ
စာရေးဆရာလုပ်ဖို့ လဲ မလွယ်ပါ (အထူးသဖြင့် သများအတွက်ကိုပေါတာဘာ )
နေရာတိုင်း ၀င်ထွက်သွားလာမေးမြန်းပြီး သတင်းယူဖို့ အတွက်က
သဂျီးအနေနဲ့ထုတ်ပေးနိုင်ပါ့မလား..စဉ်းစားမိတယ်
တရားဝင် သတင်းထောက်ဖြစ်ဖို့သက်ဆိုင်ရာ ဂျာနယ်၊မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုခုမှာ အနည်းဆုံး စာမူ အပုဒ် ၂၀ လောက်ရေးထားရတယ်
အဲသလိုရေးထားမှ သတင်းထောက်ခွင့် ကဒ်ကို ထပ်လျှောက်ခွင့်ရတာမို့ ပါ
ကိုရီးတို့မရီးတို့ ဆက်ဆွေးနွေးကြဘာ
သတင်းထောက်ကတော့ ၂၄နာရီ သတင်းဖြစ်ပေါ်မှုကို နားစွင့်၊ အပြေးအလွားသွား၊ မနားတမ်းအချိန်မှီ သတင်းရေးပို့နဲ့ အချိန်မဆိုင်း လုပ်ရတာတွေဖြစ်ပေမယ့် စာရေးတာကတော့ ကိုယ့်စိတ်ကူးလေးနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးလေး ခံစားရေးဖွဲ့ရတာလေးကတော့ ကွာခြားတာ အမှန်ဗျာ
စာရေးသူ ကတော့ ကိုယ်မရေးချင်သေးတဲ့ အချိန်မရေးလို့ ရပေမယ့် သတင်းသမားကတော့ သတင်းပေါ်ရင် လိုက်ရ၊ အချိန်မှီ သတင်းတန်ဖိုးမကျခင် ရေးရပါတယ်လေ။
အဲ… သတင်းသမားကို အတင်းရေး ခိုင်းတာတွေလည်း မြင်ရသဗျ။
မနေ့ကတောင် သတင်းသမား သူငယ်ချင်း က သူ့မျက်နှာစာအုပ်ပေါ်မှာ “သတင်းသမားတွေက ပုလင်းပေးမှ သတင်းရေးတယ်လို့ ဒီနေ့ နေ့ခင်းပိုင်းက မန္တလေးကန်တော်ကြီးမှာ စည်ပင်ကလုပ်တဲ့ စာနယ်ဇင်း တွေ့ဆုံပွဲမှာ လူကြီးတစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။ နောက်ပြီး လက်ဖက်ရည်တိုက်မှ မေးခွန်းမေးမယ်ဆိုလားပဲ။ ထပ်ပြောပါသေးတယ် စာမျက်နှာတစ်ဝက်လောက် ရေးပေးပါတဲ့။ လိုအပ်တဲ့ ထောက်ပံ့မှုတွေကို ပေးပါမယ်တဲ့။ (ပြောတာကတော့ ဟာသလိုလို ပါပဲ )” လို့ ရေးထားတာလေးတောင် တွေ့လိုက်သေးတယ်။
ကိုစိန်သော့ ကြီးက သတင်းသမား ဘ၀ကို ပိုသိမှာပါ။
တချို့ လူငယ်တွေ သိထားသင့်တာလေးတွေလည်း
အများကြီးမပြောတော့ဘူး လက်ခလယ်လေးပဲထောင်.. အဲ လက်မလေးပဲထောင်သွားတယ်။း)
စာရေးသူ နဲ့သတင်းထောက်…သဘောသဘာဝ မတူ ဘူးဆိုတာကို..ကျွန်တော်..လက်ခံနိုင်ပါတယ် ။
ကိုဘလက်..ပြောတဲ့ အချက် ကို ( အယူအဆကိုပေါ့ဗျာ) ကျွန်တော်..သဘောတူပါတယ် ။
ဆရာ မင်းထက်မောင် ရဲ့ အဆိုကိုလည်း..ကျွန်တော် သဘောကျပါတယ် မှန်တယ်..ထင်ပါတယ်။
အခုလို ရှယ်ပေးတာ ကိုဘလက်ကို ကျေးဖူးတင်ပါတယ်။
ထမင်းကြွေးလို့ အတွင်းရေးမပါ သဘောကိုစော
ကိုယ့်ခံစားချက်တွေနဲ့ ရေးတတ်ကြတာတွေအများကြီးဘဲ တွေ့နေရတယ်ဗျ။
ယုတ်မာရက်စက်သော လူတစု၏ မဆင်မခြင်ပြုမှု ကြောင့် (ဟား ဟား သူ အပြစ်တင်နေတာနဲ့
လိုရင်း ကို မရောက်ဘူး)။
လူသတ် ရင် သတ်တယ်ပေါ့။ ဒါဘဲ ရေးရမှာ၊ ဘာတွေပါလာမှန်းမသိဘူး။
ကိုဘလက်က သဘောပေါက်ပြီးသားဆိုတော့ ကိုဘလက်သတင်းထောက်လုပ် ဗျာ။
သတင်းသမားဘဲဖြစ်ဖြစ် စာရေးဆရာတယောက်ဘဲံဖြစ်ဖြစ် အခုခေတ်တော့ ဘလော့ဂ်ဂါတွေပါ ပါတာပေါ့လေ သူတို့မှာ ကလောင်တချောင်းပိုင်သွားကြပါပြီ အင်မတန်တာဝန်ကြီးပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်ဂျာနယ်သတင်းထောက်ကလေးတွေ နာမ၀ိသေသနတောင်ဘယ်နားထားရမှန်းမသိဘဲတွယ်နေကြတာ တချို့စာကြောင်းဆို မြန်မာလိုသာရေးတယ် အတော်ဘာသာပြန်ပြီးဖတ်နေရပါတယ်။ သူတို့ထက်တော့
ဒီဂေဇက်မှာရေးနေတဲ့သူတွေက အများကြီးသာကြပါတယ်ခင်ဗျား … ။ တကယ်ဝါသနာပါကြရင်ဖြင့်
ဆက်ပြီးသာကြိုးစားကြပါ။ အဲ ဘလော့ဂါတယောက်ကို စာရေးဆရာလို့ခေါ်သင့်မခေါ်သင့်ကိုတော့
အယူအဆတွေ အမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြဆဲပါ။ အဲဒီအကြောင်းတွေပြောရရင်တော့စာရှည်မှာစိုးရပါတယ်။
ကိုဘလက်ကြီးပြောသလိုပါဘဲ သတင်းထောက်နဲ့ စာရေးဆရာမတူပါဘူးလေ .. ။ ဥပမာ ဆရာစိန်ခင်မောရီ
ဆိုရင် သတင်းလဲသတင်းထောက် စာရေးဆရာ ဝေဖန်ရေးဆရာ ဘာသာပြန်ဆရာပေါ့ဗျာ .. ။
အခု DVB တို့ RFA တို့လာဘို့တောင်လုပ်နေကြပါပြီ ၀ါသနာပါရင်လေ့လာဆည်းပူးကြပါ အခွင်းအရေးဆိုတာ ပေါ်လာမှာပါ … ။ ကျနော်လဲကြီးမှထောက်ချင်တာနဲ့လေ့လာနေရပါတယ်။
ကိုချောပြောတဲ့ စေတနာကို လေးစားပါတယ်။
ခေတ်သစ်စနစ်သစ်ကို သွားဖို့ အရည်အချင်းတွေ ပြည့်စုံအောင် မွမ်းမံပေးကြသူ ကိုချောရေ- ဖတ်ရှု့မှတ်သားသွားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့မို့ သတင်းမထောက် တထောက်လုပ်ရင်ကော ဘယ်လိုနေမလဲ?????
ဆိုလိုတာက ကြုံတဲ့သတင်းကို ထောက်ပြီး၊ တကူးတက လိုက်မထောက်တဲ့ သတင်းထောက်ပေ့ါ။
ကွန်းမန့်ပေးသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ဒီပို့စ်လေးကို ရေးထားတာ ကြာပါပြီ။
အတူတူ လေ့လာသင်ယူတယ်လို့ သဘောထားပြီး ရေးထားတာပါ။
ကျွန်တော် သတင်းထောက်စစ်စစ်ကြီး လုပ်သွားဘို့ လုံးဝမရည်ရွယ်ထားပါဘူး။
သတင်းထောက် ဆိုတာထက် လက်ထဲကင်မရာကိုင်ထားပြီး
ကြုံရင် ဓါတ်ပုံလေးရိုက်၊ သတင်းလေး တတ်သလောက်မှတ်သလောက်ရေး
ဆိုတာမျိုးလေး (မမပြောတဲ့ ကြုံတဲ့သတင်းကိုထောက်တဲ သတင်းထောက်မျိုး)
အခုရေးလိုက်တာက အလကားတော့ မဖြစ်လောက်ဘူး၊ အဆိပ်အတောက် တစ်ခုတော့
တိန်.. .ခုမှ ပြန်ရောက်လို့မန့်မလို့ဟာ ..ပိုစ့် ပိုင်ရှင်က စာရင်းပိတ်တွားဘီ …
ခွိ…. တူဒေးက ဖလိုင်းဒေးလေဂျာ …နည်းနည်းပါးပါးနောက်ကျမှာပေါ့လို့ကို …
ကျနော် ဖုန်းနဲ့ မြန်မာစာပေါ်တဲ့ ဘရောက်ဇာ နဲ့ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဗျ.. ရထားစီးတုန်း..
မြန်မာဖောင့် မရှိလို့ မမန့်ဖြစ်တာပါဗျာ
အဂ္ဂမဟာ ဖေ့စဘုတ်တော်ကြီးပေါ်ရောက်တဲ့အခါ …..
လက်တို့စမ်းပါဗျာ …သတင်းဓါတ်ပုံသမားတွေ အကြောင်း လက်တို့ချင်လို့ရယ်ပါ…..
မနက်ဖြန် မနက် အစောကြီး ကိုယ် မန္တလေး သွားဦးမယ်။
ဒီရက်ပိုင်း ညီလေး ပေးတဲ့ ကွန်းမန့်လေးတွေအတွက်
တိကျတဲ့ သတင်းရပ်ကွက်က စောစောကလေးတင် ကြားပြီးပါပြီဗျာ ….
ကျနော် မအားလို့ စာမရေးဖြစ်တာပါဗျာ လွှတ်ရေးပစ်ချင်ရဲ့…အင်း….. သည်ဝိခ်အန်းတော့ …
ရသလောက်လေး ..ချ ရေးထားနှင့်ပါ့မယ်ဗျာ …
မန်းကအပြန် ထိုးမုန့်မလို ကောမန့်သာ လိုပါသည်ဗျို့ …..
သတင်းသမားနဲ့ စာရေးဆရာ မတူတာကတော့ ပြောစရာတောင်လိုမယ်မထင်ပါဘူး။ သတင်းသမားတွေက အချိန်ပြည့် မျက်စိဖွင့် နားဖွင့်ပြီး ဘယ်နေရာဘယ်လိုဆိုတာ လေ့လာသတိနဲ့ အပြေးသွားပြီး မှန်မမှန်ကိုလည်း သုံးသပ်ရပါသေးတယ်။ ကိုယ်ပြောတဲ့သတင်းက အမှားဆိုရင် သတင်းသမားတစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀မှာ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ စာရေးဆရာကတော့ ကိုယ်ရေးချင်တာ သိတာနဲ့ မတူတဲ့အတွေးကို အေးအေးဆေးဆေးတွေးပြီး ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေ ရေးသားလုိ့ရပါတယ်။ ကွာခြားချက်တွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ ဟီး ကိုယ်လည်း အရမ်းကြီးသိလို့ရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ သတင်းဆိုတာ အချိန်နဲ့အမျှအရေးကြီးနေတယ်ဆိုတာတော့ နားလည်ပါတယ်။
သတင်းသမားနဲ့ စာရေးဆရာ မတူတာတော့အသေချာပဲ..။
သိချင်တာ မြန်မာပြည်က သတင်းထောက်မနဲ့ စာရေးဆရာမ ဘယ်သူပိုချောသလဲလို့…။ ရေးတဲ့ သတင်း စာတွေကိုတော့ ယုံကြည်ပြီးသားမို့ မဖတ်တော့ပါဘူး…။ အဲဒါ ကိုဘလက် အပန်းမကြီးရင် ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ တင်ပေးပါ။ တဆိတ်လောက်……
စာရေးဆရာ ဖြစ်ဖို့က ခံစားချက်တွေ အဖွဲ့အနွဲ့နဲ့
ဖတ်သူ နားလည်အောင် ရေးတတ်ဖို့လိုမယ်။
သတင်းထောက်ကတော့ အဖြစ်အပျက်ကို ခရေစေ့တွင်းကျ
နှစ်ခုစလုံးကတော့ သူ့ပညာနဲ့ သူပါပဲ။
ဘယ်သူ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ အထင်သေးလို့ မရပါဘူး။
ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို အထင်သေးဖို့ဆိုတာထက်
လူတစ်ယောက်က နှစ်ဘ၀ကို ရောထွေးမသွားဘို့ သတိလေးပေးထားတာပါဗျာ။
ဟုတ်ပါတယ် ကိုဘလက်ချောရေ။တခါတလေ ကျနော်တောင်မှ ကိုယ့်စိတ်ထဲကခံစားချက်လေးတွေကို
ပို့ စ်မှာထည့်ရေးမိတော့ သတင်းက နည်းနည်းတော့ပိုသွားတာပေါ့နော်။ဒါပေမယ့် ကိုဘလက်ချောရဲ့ စာသား
တကယ်တော့ စာရေးသူ လူတစ်ယောက်တည်းမှနေ၍ စာရေးဆရာအလုပ်ကိုရော၊ သတင်းထောက်အလုပ်ကိုပါ တစ်ပြိုင်နက် လုပ်ကိုင်နိုင်ကြပါသည်။ လုပ်ကိုင်ခွင့် ရှိသည်လည်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ လုပ်ကိုင်ခြင်းသည်လည်း အကျိုးရှိသော၊ ကောင်းမြတ်သော ကိစ္စတစ်ရပ်ပါပေ။ သို့သော် စာရေးဆရာနှင့် သတင်းထောက်တို့၏ အလုပ်သဘော သဘာဝခြင်း၊ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်ခြင်း မတူ ကွဲပြားခြားနားကြောင်းကိုတော့ သတိပြုဆင်ခြင်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ စာရေးဆရာအနေဖြင့် ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်ကို ရေးသားသောအခါ၌ မိမိ၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းပေါ် အခြေခံ၍ ခံစားရေးဖွဲ့နိုင်သော်လည်း သတင်းထောက်အနေဖြင့်မူ သတင်းတစ်ပုဒ်ကို ရေးသားသောအခါ၌ လက်တွေ့အဖြစ်မှန်အပေါ် အခြေခံ၍ မိမိ ခံစားမှုမပါပဲ အပိုအလိုမရှိ ရေးသားရန် လိုအပ်ပေသည်။ သည်နှစ်မျိုးလုံးကို ရောထွေးပစ်၍ကား မဖြစ်ပါ။ မိမိ၏ နှစ်ဘ၀ကို မိမိဘာသာ စည်းခြား၍ ချုပ်ထိန်းဖြတ်သန်းနိုင်ပါမှ အောင်မြင်ခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်ဟု…။